admin | Radio Himilo
Manchester City oo kalsooni ku qabta heshiiska cusub ee Raheem Sterling
Himilo – Manchester City ayaa sugi doonto mustaqbalka fog ee Raheem Sterling, iyadoo qandaraaska uu ka dhigi doono inuu noqdo ninka ugu mushaharka badan taariikhda kooxda. Weeraryahanka, oo u dhaqaaqay Etihad sanadkii 2015, ayaa kusoo muuqday mid ka mid ah ...
Maxaad dhaxleysaa marka aad dhir beerto?
Himilo – Dhir beeristu waa mid kamid ah waajibaadka mideeya jiil kasta oo koonkaan ku imaanaya qaddarta eebbe, sababtuna waa in dhirtu tahay saaxiibka ugu dhaw degaanka, degaankuna waa halka hoyga iyo noloshaba u ah aadamaha cammiraya koonka. Asal ahaan ...
Tottenham Hotspur oo awood u leh inay Giovani Lo Celso ku hesho 27milyan oo ginni
Himilo – Tottenham Hotspur ayaa leh ikhtiyaar ah inay kula saxiixato Giovani Lo Celso heshiis joogto ah 27.3 milyan ginni bisha Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga. Naadiga ka dhisan Waqooyiga London ayaa si amaah ah ugala soo wareegtay ...
Man City Oo Ku Biirtay Tartanka Lautaro Martinez
Himilo – Kooxda Man City ayaa lagu soo waramayaa in ay qorsheyneyso in ay u dhaqaaqdo weeraryahanka kooxda Inter Milan Lautaro Martinez. 22-sano jirkan ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ku qaadanaya kooxda Inter inta lagu gudajiray ololaha 2019-20, isagoo shabaqa soo ...
Khubaro: Soonka joogtada ah ayaa kahortag u ah wadno xannuunka
Himilo – Baaritaan lagu daabacay majaladda MedicalXpress ayaa tilmaamay saameynta soonka joogtada ah uu ku reebo caafimaadka wadnaha iyo da’da qofka. Hay’adda caafimaadka wadnaha Mareykanka ayaa sheegtay in soonka joogtada ah uu yareeyo khatarta cudurrada wadnaha isaga oo dheereeya da’da ...
Real Madrid oo Man United’ ugu yaboohaysa £ 42m oo lagu daray Vinicius Junior
Himilo – Real Madrid ayaa isku diyaarineyso inay u soo bandhigto Manchester United 42 milyan ginni iyo weeraryahanka reer Brazil Vinicius Junior iyagoo rajo ka qaba inay la soo wareegaan Paul Pogba inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha ...
Muxuu u jareynayaa qofka marka uu baqo?
Himilo – Natiijadda daraasad cilmiyeed oo ay sameeyeen baarayaal katirsan jaamacadda Colombia ayaa muujisay sababta qofka u jareynayo marka uu naxo. Baaritaanka oo lagu daabacay majaladda Current Biology ayay khubarada ku sheegeen in marka qofka dareemo cabsi uu jirkiisa soo ...
Daraasad: Seddex meelood meel carruurta Ingiriiska ayaa aaminsan in lo’da dhasho ukumo
Himilo – Carruurta dugsiyada dalka Ingiriiska ayaa ka cabanaya garasho la’aan badan oo la xiriirta illaha cuntada iyada oo cunuggii kamid ah 3-dii cunug uu rumeysan yahay in lo’da dhasho ukun. Sida laga soo xigtay baaritaan ay sameysay hay’ad samafal, ...
Muxuu Ole Gunnar Solskjaer u sheegay ciyaartooydiisa?
Himilo – Ole Gunnar Solskjaer ayaa u sheegay ciyaartoyda Man United inuu waayi doono shaqadiisa hadii kooxda ay guuldarro ka soo gaarto Tottenham Hotspur iyo Manchester City isbuucaan. Ninka reer Norwey ayaa ku jira cadaadis aad u sareeya ka dib ...
Maxay tahay khatarta sannad kasta u dhintaan 700,000 qofood?
Himilo – Dad badan ayaa ku dhinta dagaalada balse dhimashada dadka ayaa inta badan ku timaada sababo kale sida qaniinyada kaneecada, xasharaadka ama xayawaanada dad cunka ah. Sida uu qoray bogga Business Insider, daraasad cusub ayaa daaha ka qaaday jiritaanka ...